GAROOWE:- Puntland Oo ka hadashay Qabsashada Somaliland ee Taleex , Beesha Caalamkana baaq u dirtay. |
GAROOWE:- Puntland Oo ka hadashay Qabsashada Somaliland ee Taleex , Beesha Caalamkana baaq u dirtay.
Iyadoo Maalintii Khamiista ee shalay(12 June 2014) Ciidamada Maamulka Somaliland ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta Degmada Taleex ee Gobolka Sool, ayna Taleex ka saareen Maamulka Khaatumo ayaa Puntland waxaa ay si Kulul uga hadashay Qabsashada Taleex, waxaana ay ku macnaysay Duulaan Gardarro ah oo Somaliland ay kusoo qaadday Dhulka Puntland.
Afhayeenka Madaxtooyada Puntland C/laahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel ayaa war saxaafadeed uu soo saaray, waxaa uu ku sheegay in beesha Caalamka iyo Soomaalida kaleba ay ogaysiinayaan in Duulaanka Somaliland uu gardarro yahay haddii uu sii socdana Puntland ay dhulkeeda difaacan doonto.
Warsaxaafadeedka Afhayeenka Madaxtooyada Puntland oo ka koobnaa 5 Qodob ayaa sidaan u dhignaa:-
1:- Waxay dawladda puntland la socod siineysaa beesha caalamka in maamulka soomaaliland uu duulaan qaawan ku soo qaadey 10 june, 2014 degmooyinka taleex iyo xingalool oo ka tirsan dhulka puntland.
2:- Duulaankaas gardarada ah wuxuu sababay barakac baahsan oo ka socda deegaamadaas.
3:- Dawladda puntland waxay mar kale u caddeynaysaa ummadda soomaaliyed,dawladaha dariska ah , iyo beesha caalamka in maamulka soomaaliland mar kasta oo ay duulaan kusoo qaadaan dhulka puntland ay weheliyaan howgalo ay ku taageerayaan ururka al shaab ee argagixisada ah si ay uga fuliyaan gudaha Puntland falal argagixisonimo.
4:- Ugu danbeyn dawladda puntland waxay diyaar u tahay iyadoo fulineysa waajibaadka dastuuriga ah in ay difaacdo dhulkeeda iyo dadkeeda.
5:- Waxay kale oo ay dawladda puntland u direysaa baaq nabadgalyo iyo in la joojiyo colaadaha ku soo noqnodey gobolka shabeelada hoose ,iyo kuwo ka soo cusboonaadey gobolka galguduud in lagu dhameeyo colaadahaas wado hadal.
C/laahi Mohamed Jamac Qur’aan jecel
Marka Laga soo tago War saxaafadeedyada iyo hadalada Puntland ay Somaliland qalabka warbaahinta u marsiiso ma jirto wax dhaq dhaqaaq ah oo Puntland ay ka samayso Deegaanada Gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ee marba marka ka dambaysay Ciidamada Somaliland ay iskusii ballaarinayaan.